IHuawei isebenza kwilizwi layo elincedisayo | I-Androidsis
Xa sithetha ngabancedisi belizwi, amagama amabini afika ngokukhawuleza engqondweni Amazon Alexa y Umncedisi weGoogle. Ngelixa uGoogle elawula icandelo le-smartphone le-Android kunye nomncedisi oqhutywa yidatha, i-Alexa ikrobe indawo yayo kwicandelo elitsha lesithethi esihlakaniphile. Nangona kunjalo, Ngoku uHuawei angangenela ugqatso.
Oku kulindeleke ngenxa yeempawu ezinamandla ezibonisa ukuba umncedisi olandelayo welizwi uza kuvela kwinkampani yaseTshayina kwaye uza kufika kungekudala, Ukuze ufumane indawo yentengiso yokhuphiswano.
URichard Yu, u-CEO we-Huawei's Consumer Electronics, ucatshulwe yi-CNBC kudliwanondlebe olukhethekileyo. Wayenokuthi oku: "Ekuqaleni, ikakhulu sisebenzisa uMncedisi kaGoogle kunye neAmazon Alexa kwiAI Cube yakho kunye nee-smartphones zakho." Uye wakhankanya: “Sifuna ixesha elithe kratya ukuphuhlisa iinkonzo zobuntlola ezingezizo ezomntu. Emva kwexesha siza kuyandisa le ngaphandle kwe China.
IHuawei sele inelizwi lomncedisi wase-China elibizwa ngokuba yiXiaoYi, ukuze ungabhidaniswa negama elifanayo likaXiaomi uXiao AI. Inqaku lesibini lehlabathi kraca kutsha nje lazise iHuawei AI Cube, eyisithethi sokuqala se-AI senkampani. U-Yu wathi de umncedisi wabo welizwi alilungele ixesha eliphambili, baya kuqhubeka nokusebenzisa iGoogle kunye neAmazon kwimveliso yabo yehlabathi. (Fumanisa Okuninzi: IAmazon Alexa Vs Google Assistant, duel yabancedisi kwi-Android).
Ngaphandle kwengxelo yesigqeba, kuninzi malunga nomncedisi welizwi kuhlala kungaziwa. Akukho lwazi lokuba zeziphi iilwimi eziza kuzixhasa ekuqaleni kwayo, nangamaxesha okwaziswa kwayo, okanye nokuba izakubizwa njani ngaphandle kwe China. Nangona kunjalo, kubonakala ngathi ukuthandwa okukhulayo kwabancedisi belizwi kuye kwatsala umdla wesigebenga saseTshayina kwaye sifuna isiqwenga sepayi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » IHuawei ilungiselela umncedisi wayo welizwi okrelekrele
Musa ukushiya i-zombie emi kwiDon Zombie